सिइओ, मन्त्र आइडियाज
पछिल्लो समय प्ले स्टोरमा लोकसेवा नेपाल एप ट्रेन्डिङमा छ । के हो यो एप ?
सन् २०१४ देखि हामीले यो एप सुरु गरेका हौं । लोकसेवाको तयारी गर्न विभिन्न इन्स्टिच्युट धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको थाहा पाएपछि मोबाइलबाटै अभ्यास गर्ने प्रणाली ल्याउन केही बेसिक फिचरसहित यो एपको विकास गरेका थियौं । विस्तारै फिचर थप्दै गयौं । एन्ड्रोइडमा ४ लाख र आइओएसमा ५० हजारभन्दा बढी डाउनलोड भइसकेको छ । दिनमा ५ सयभन्दा बढी रजिस्ट्रेशन गर्ने गरेका छन् । वेबसाइटबाटै कन्टेन्ट किन्ने र खेल खेल्न मिल्ने सुविधा पनि दिएका छौं । समग्रमा लोकसेवा एप निःशुल्क डाउनलोड गरी मोबाइलमार्फत लोकसेवाको तयारी कक्षा र महत्वपूर्ण जानकारी लिन सकिन्छ ।
अहिले कस्ता फिचर राख्नुभएको छ ?
प्रयोगकर्ताको माग र आवश्यकता अनुसार हामीले नयाँ फिचर ल्याएका छौं । विभिन्न इन्स्टिच्युट र लेखकसँग सहकार्य गरेर कन्टेन्ट निर्माण गरेका छौं । हामीले इन्स्टिच्युटमै गएर अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न चाहन्छौं । अहिले हामीले लोकसेवा प्लस फिचर ल्याएका छाैं । जहाँ प्रयोगकर्ताले सब्स्क्रिप्सन गरेपछि एक हप्ता, एक महिना र एक वर्षको प्याकेज लिन पाउँछन् । यसअन्तर्गत १ हप्ताको २५ रुपैयाँ, १ महिनाको ८० रुपैयाँ र १ वर्षको ३ सय रुपैयाँ शुल्क, एनसेल, ई-सेवा, खल्ती र इ–बैंकिङको प्रयोगमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ । एपमा साप्ताहिक रूपमा आउने समसामयिक ज्ञान क्विज, साप्ताहिक र मासिक आउने समसामयिक ज्ञान, नयाँ मोडल सेटमा निःशुल्क अभ्यास, आफूले अभ्यास गरेको सेटको पूर्ण एनालाइटिक्स र पर्फरमेन्स रिपोर्ट तयार पार्न सकिन्छ ।
लोकसेवा सम्बन्धी अरु पनि मोबाइल एप छ, यो एप कसरी पृथक र उत्कृष्ट छ ?
प्रयोगकर्तालाई लोकसेवा अभ्यास गराउने फर्मयाटको एप नेपालमा कमै छ । प्रयोगकर्ताले जे आवश्यकता महसुस गरेका छन्, त्यस्तै फिचर ल्याउन खोज्नु हाम्रो विशेषता हो । अर्कोतर्फ थोरै पैसा तिरेर धेरै फिचर पाउने एप यही हो । किताबको सट्टा एप चलाउनुका पछाडि प्रयोगकर्ताले सजिलो मात्रै हेर्देनन्, समसामयिक अपडेट पनि हो । हामीले यसमा पनि ध्यान दिएका छौं ।
उसो भए एपमै पूर्ण भर परेर परीक्षको तयारी गर्न सकिने अवस्था आएको हो ?
हामीले एपबाटै सबै तयारी गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्राय राखेका छौं । अहिले हाम्रो एप चाहिन्छ भन्ने नभई भए राम्रो भन्ने मात्रै भइरहेको छ । यसबाट अब चेन्ज गर्दैछौं । हालसालै एनसेलसँग पनि टाइअप भएको छ । यसपछि दुर्गम ठाउँमा बसेर पनि लोकसेवाको तयारी गर्न पाउने भएका छन् । इन्स्टिच्युटमा गएर पढ्न नसक्नेहरुले त अहिले नै हाम्रो एप नियमित प्रयोग गर्छन् । भोलिका कम्प्लिट प्याकेजसहित एप आउँदा यसको प्रयोग झनै बढ्ने छ ।
भोलिका दिनमा लोकसेवा एप कसरी आउँदै छ ?
परीक्षार्थीले लोकसेवाको परिक्षा दिनुभन्दा अघि परीक्षालाई गाइड गर्ने नयाँ फिचर ल्याउँदै छौं । यसबाट अझै परीक्षा दिन सजिलो होस् । अर्कोतर्फ हामीले भिडियो टेस्टको पनि प्लान गरिरहेका छौं । यसबारे पनि कुराकानी भइरहेको छ । त्यसपछि कम्प्लिट प्याकेजको रुपमा हामीले ल्याउने छौं । नोटहरु पिडिएफमा पढ्न मिल्ने फिचर ल्याउँद्यै छौं । प्रयोगकर्ताका लागि चाहिने एपमा यो पनि पर्न थालेको छ । लोकसेवाको तयारी नगरेकाले पनि सामान्य जानकारी लिन एप उपयोगी हुँदै आएको छ । हामीले दुर्गमका प्रयोगकर्ताका लागि नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौं ।